လင်းခက်: Internet Setting ချိန်နည်းများ
လာရောက်လေ့လာအကဲခက်သည်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ၊ နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်ရှေ့က အစ်ကိုတွေရေးသားထားတဲ့ ဘလော့များမှလည်း ပြန်လည်မျှဝေကြောင်းဝန်ခံပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်း ကြိုးစားရေးသားနေပါတယ်၊ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
Facebook မှာ ဖတ်လို့ရအောင် Like လုပ်သွားအုန်းနော်..စကားလေးတွေလည်းပြောခဲ့ပါဗျ
အကုန်စုထားတာဗျ ပီးရော.. အေးရော.. တစ်ခုထဲ ဖက်ယုံပဲ
GSM Network သုံး Mobile Phone , CDMA 800 Network သုံး Mobile Phone , 1500 တန် CDMA 800 Network သုံး Mobile Phone , GSM ဖုန်းများ အင်တာနက်သုံးရန် Setting ချိန်နည်း ( Android )
1.GSM Network သုံး Mobile Phone တွေအတွက်
2.CDMA 800 Network သုံး Mobile Phone တွေအတွက်
3.1500 တန် CDMA 800 Network သုံး Mobile Phone တွေအတွက်
APN မပါသော သူများကတော့ PPP Digit မှာ #777 ထည့်ပါမယ်။ Connection name တောင်းခဲ့ရင် mectel ပါနော်။
Credit : IT Bank
ဒါလေးကတော့ Myanmar Mobile User Group က မျှဝေထားတာလေးပါ… တလက်စတည်း Share ပေးလိုက်ပါတယ် …..
Myanmar Mobile Application Store ရဲ့ facebook Mobile Group ဖြစ်တဲ့ Myanmar Mobile Users Group မှာ တင်ထားတဲ့ GSM အမျိုးအစား Android ဖုန်းများတွင် 3G Internet Setting ထည့်နည်းကုိုပြန်လည်ဝေမျှပေးလုိုက်ပါတယ်။
အခု GSM ဖုန်းအားလုံးမှာ အင်တာနက်သုံးလုို့ရပြီဆုိုတော့ GSM အမျိုးအစား Android ဖုန်းများတွင်
GSM ဖုန်းများ အင်တာနက်သုံးရန် Setting ချိန်နည်း ( Android )
ပထမဦးစွာ Setting ထဲကိုဝင်ပါ
၂ – Wireless & networks ထဲဝင်ပါ
၅ – Menu Key ( မျဉ်းကြေင်းသုံးကြောင်းထပ်) ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုနှိ်ပ်ပါ
၆ – ဒီအတိုင်းလိုက်ဖြည့်ပါ
Name – မိမိနှစ်သက်ရာ ( ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ပြောတာ )
၄ – Data Enable ကို အမှန်ချက်လိုက်ပါ..
အပေါ်တက်အောက်ဆင်း မြှားလေးတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ် အင်တာနက်စသုံးလို့ရပါပြီ
မပေါ်လာပါက ဖုန်းကို ပါဝါ ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ ….
ရေးသားသူ ko htet at 6:06 PM
အကြည့်အများဆုံး Post များ
မင်းလူ စာအုပ်များ (၄၆ အုပ်)
မိုးယုစံပုံလန်းလန်းလေးများ (Dမိုးသား မှ ပြန်လည်မျှဝေသည်)
ဂီတာတီးတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေအတွက် ဂီတာတီးနည်း စာအုပ်3အုပ်
Learning Work 2007 (ရုံးသုံးကွန်ပျူတာ စာရိုက်နည်း ၂၀၀၇)
အင်တာနက် သုံးလိပ်စာများ (1)
ဟင်းမချက်တတ်သူများ စာအုပ်ဖတ်ပြီး လိုအပ်တာဝယ် လက်တေ...
ဖုန်း မှာဆော့ဖို့ ရှမ်းကိုးမီးဖဲဂိမ်း
သရဲရှိမရှိရှာတဲ့ Ghost Radar
KRE-O CityVille Invasion v1.1.8 [Mod Money] Apk Ga...
Glory of Generals HD v1.0.3 Apk Game 49MB
Air Call Accept v1.9 Apk
Next Launcher 3D v1.53 For Android
Facebook Messenger v2.6.1-release Apk
Camera Fv5v1.5 Full Apk 3MB
OfficeSuite Pro7(PDF & HD) v7.1.1237 Apk 7MB Dir...
Banzai Surfer v1.1.1 Apk Game 46MB
ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ထိန်းချုပ်ကြမယ်..(အသစ်)
Nature Wallpaper Collection 27MB
MPT Service v1.0.1
Facebook မှာ Post အတုလုပ်မယ်
သီချင်းလေးတွေ နာမည်ပြောင်းကြမယ် Apk for Android
ကမ္ဘာ့အဆင့်တစ် English ~ Myanmar Dictioanry Babylon...
Internet Download Manager 6.17 Build7(5MB)
ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးကို ဘာသာပြန်ပေးနိင်တဲ့ Website
YouTube Video တွေကို Software မလိုဘဲဒေါင်းမယ်
ဂီတာတီးတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေအတွက် ဂီတာတီးနည်း စာအုပ်...
FL Studio Mobile v1.1 Apk 179Mb
Camera360 Ultimate v4.5.5 Apk
Viber v3.1.1.15 For Android
Facebook မှာ ဖတ်လို့ရအောင် Like လုပ်ပြီးအားပေးပါ
www.desicomments.com | Good Night | Forward this Image